Vaovao - Hetsika fananganana ekipan'ny departemantan'ny KES any ivelany- Ski
Tamin'ny 12 desambra lasa teo, nikarakara ekipa fanaovana hetsika ski ny departemanta KES any ampitan-dranomasina, mandritra ny valan'aretina COVID-19, manantena fa ny mpiasa rehetra dia afaka mitazona matanjaka sy salama hatrany, miziriziry amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena, manohitra ny hatsiaka sy viriosy, manohy manolotra serivisy tsara kokoa ho an'ny ampitan-dranomasina mpanjifa.
Ho avy ny ririnina, ny Beijing tsara tarehy koa dia mandray ireo felam-panala manidina, mpiasa avy amin'ny KES no nankafy ilay karnavaly teo amin'ny tontolon'ny ranomandry sy lanezy. Nandeha ski tamim-pifaliana izy ireo, nilalao ady amin'ny lanezy, nahatsapa ny hafainganana sy ny fitiavan'ny traikefa ny oram-panala tafahoatra tao amin'ny toeram-pialan-tsasatra Beijing Pinggu Yuyang.
Ny ski dia fanatanjahan-tena an-kalamanjana amin'ny ririnina miaraka amin'ny fanentanana mafy. Ny fizotran'ny ski, raha mbola eo amin'ny fijoroan'ny skis, ary amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny tanana sy tongotra, miampy ny haitao mahatalanjona, azonao atao ny mitsambikina amin'ny lanezy!
Hetsika fananganana ekipa manao ski, ataovy izay hanamafisana ny ekipa miasa amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny fifaninanana, fiaraha-miasa, fifandonana tanteraka, avelao ny mpiasa tsirairay hifankahalala tsara, handalina mba hahatakatra tsara ny kolontsain'ny orinasan'ny orinasa, miaraka amin'izay. mankasitraka ny lanezy avelao ny mpiasa tsirairay hahatsapa hikarakara feno ny mpiasa sy ny fahafahany mandray anjara amin'ny fampandrosoana manaraka ny orinasa.
Manolotra sarontava N95 maimaim-poana ny KES ary manatitra azy ireo miaraka amin'ny baiko.